Duokan Kindle Touch | eReaders အားလုံး
သင်ခန်းစာ: Duokan ကိုသင်၏ Kindle Touch တွင်ထည့်ပါ
တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ လူကြိုက်များသောဝယ်လိုအားဖြင့်ယနေ့လူသိများသောအခြား operating system ကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်အခြားရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာကိုတင်ပြသည် သင့်ရဲ့ Kindle အပေါ် Duokan ပြproblemsနာများနှင့်အန္တရာယ်များမများစွာထိပါ။
ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့အဆင့်အားလုံးကိုဂရုတစိုက်လိုက်နာပါ အသစ်တခုအတိုင်းအတာအထိသင်၏အမေဇုံစက်ကိုယူပါ။ သင်၌သံသယသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
သင်၏ Kindle Touch တွင် Duokan ကိုထည့်သွင်းရန်အဆင့်များ
ကန ဦး ပြင်ဆင်မှုများ
ပထမ ဦး စွာသင်၏ Kindle ရှိရမည် အနည်းဆုံး 80% ဘက်ထရီ ဒါကြောင့် 100% ပြည့်စုံသောအကြံပြုသည်ပေမယ့်။ Duokan တွင်သင်တပ်ဆင်နိုင်သောယခင်ဗားရှင်းများအားလုံးကိုသင်ဖယ်ထုတ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။
သင်၏ Kindle Touch ၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုစစ်ဆေးပါ
Duokan ကိုစတင် install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ကို Amazon operating system ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် configuration menu ထဲရှိ option ကိုရွေးချယ်ပါ "Kindle ကို Update လုပ်ပါ".
ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့က Duokan download link များကိုပေးသောကြောင့် profegles.blogspot.com.es ဘလော့ဂ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
download link ကိုဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်တွေ့ရမည့် "Download" အပိုင်းတွင်တွေ့လိမ့်မည်
သင်၏ Kindle ကို USB port မှတစ်ဆင့်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသေးပါကတပ်ဆင်မှုစတင်ရန်ယခုပြုလုပ်ပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖိုင်ကိုရွှေ့ရမယ်။DONT_HALT_ON_REPAIR” Duokan ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါက၎င်းစက်ကိုပြန်လည်စတင်သောအခါ၎င်းကိုဖန်တီးသင့်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်နိုင်ပါသည်။
ယခင် download လုပ်ထားသော file ကို unzip လုပ်ပါ။ ခေါ်သည့်ဖိုင်တွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည် "¦¦Î¦-¨¨ÞÊ¬ + ¢¢¦¦Á + + + + + +¦¦Á + + + + + + +¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦¦¦Î¦ ¦¦Î¦-¨¨¦¦Î¦¦¦Î¦ + ¢ ¦¦Á - + - + ¢" ဖိုလ်ဒါများ "DK_System " y "diagnostic_logs "ဖိုင်များသာမက "ENABLE_DIAGS " y "data.tar.gz " ငါတို့ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုသူများဖြစ်ကြသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Kindle ၏ root directory သို့ကူးယူလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Kindle ပြင်ဆင်မှုမီနူးမှသင်၏ Kindle ကိုပြန်လည်စတင်ပါ (Menu ကို / Configuration / Menu ကို / ပြန်လည်စတင်).
ပြီးတာနဲ့ restart ပြန်လုပ်ပါ (ပြီးရင်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာမှအချိန်ဖြုန်းပါမယ်) ကျွန်တော်တို့ option ကိုနှိပ်ရပါမယ်။Diags များကိုထွက်ရန်၊ ပြန်လည်စတင်ပါသို့မဟုတ်ပိတ်ပါ ".
ပေါ်လာမည့်နောက် menu တွင် option ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးရမည် "ရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုပိတ်ပါ" ပြီးတော့ option ကို "ဆက်ရန် ".
Duokan သည်အလိုအလျောက်စတင် install လုပ်သင့်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်တရုတ်လည်ပတ်မှုစနစ်မှားယွင်းနေလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရမည့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် dual boot option ပေါ်လာလိမ့်မည်။
Duokan ကိုအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်စပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရမည် "DK_system \_ xKindle \_ config.ini " PSPAD တည်းဖြတ်သူနှင့် (ဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင် download link ကို "ကူးယူခြင်း" ကဏ္inတွင်တွေ့လိမ့်မည်) ။ ဖိုင်ရဲ့အဆုံးမှာငါတို့ထည့်ပါလိမ့်မယ် ဘာသာစကား = ၂ ကျွန်ုပ်တို့သည် menus များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ခံစားလိုပါကသို့မဟုတ် ဘာသာစကား = ၂ ကျနော်တို့စပိန်ပိုနှစ်သက်လျှင်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ Kindle ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသင့်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - သင်ခန်းစာ: Duokan ကိုသင်၏ Kindle Device တွင်တပ်ဆင်ပါ
ရင်းမြစ် - profegles.blogspot.com.es
ဒေါင်းလုပ် - Duocan PSPAD အယ်ဒီတာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Amazon Kindle » သင်ခန်းစာ: Duokan ကိုသင်၏ Kindle Touch တွင်ထည့်ပါ
wow ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သံပုရာသီးသည် I ငါထည့်သောအခါငါမည်သို့သွားသည်ကိုငါပြောမည်။
ငါတို့သည်သင်တို့လူကိုကူညီဖို့ဒီနေရာကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒါကခင်ဗျားအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ခင်ဗျားမှာမေးခွန်းတွေရှိရင်သူတို့ကိုငါတို့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ငါနင့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးနွေးထွေးတဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့နာရီပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်။ ငါရောဂါရှာဖွေရေး mode ထဲဝင်ဖို့ခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေတယ်။ ငါဘယ်လိုဝင်လာပြီဆိုတာပြောပြပါ့မလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏အကူအညီ, Juan Pablo
Wow၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကပြောခဲ့တာကိုမေ့နေခဲ့တာပေါ့၊ အမှန်တရားကပြproblemsနာမရှိတဲ့တပ်ဆင်မှု၊ operating system6ကိုပြproblemနာမရှိဘဲထိန်းသိမ်းထားတယ်၊ ငါ Duokan ကိုပဲသုံးပေမယ့်ငါကပိုပြီးသဘောကျတယ်၊ အဲဒါကို PDF ဖတ်ဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၆ လကြာရင်တောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ Villamandos၊ chinese.txt ဖိုင်ဘယ်မှာလဲဒါမှမဟုတ်တရုတ်ဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုပေးတဲ့စာသားဖိုင်ဆိုတာဘယ်မှာလဲသိလား။
ငါ OS ကိုစပိန်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်လိုရေးထားတဲ့အပိုင်းတွေရဲ့ဘာသာပြန်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ kindle တွင်မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမှ DONT_HALT_ON_REPAIR ဟူသောအမည်ဖြင့်မတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက် Juan Pablo ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်၏ကြင်နာမှုသည်မည်သည့် device mode သို့မ ၀ င်ပါ။ ၎င်းသည် Amazon OS နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အဖြေမကြာခင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆိုဖီးယားမှာလည်းအတူတူပါပဲ၊ ဖိုင်ကိုငါရှာလို့မရဘူး၊ ကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာရောဂါရှာဖွေရေး mode မှာမသွားဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Sofia နှင့် Valentina ကဲ့သို့ DONT_HALT_ON_REPAIR ဖိုင်မရှိပါ၊ ၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းအားရောဂါရှာဖွေရေး mode တွင်ပြန်လည်စတင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ မည်သည့်ဖြေရှင်းနည်း ???
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Firmware version ကြောင့်လား။ ငါ့မှာ ၅.၃.၇ ရှိတယ်။
Onyx Boox M92 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Amazon ebook ကိုအခြား format များအဖြစ်ပြောင်းရန်သင်ခန်းစာ